Baarlamaanka oo Xukuumada Soomaaliya usoo jeediyay eedeyn tii ugu weyneyd inta ay jirtay	|
Baarlamaanka oo Xukuumada Soomaaliya usoo jeediyay eedeyn tii ugu weyneyd inta ay jirtay
Gudoomiyaha gudiga Maaliyada baarlamaanka Federalka Soomaaliya, Sheekh Aadan Sheekh Max’ed, ayaa waxa uu ku dhaliilay xukuumada Soomaaliya qaabka ay uga gaabisay wax ka qabashada dhibaatada kataagan isku bedelashada lacagaha.
Sheekha ayaa waxa uu sheegay in gudigooda uu isagu madaxda kayahay loo xilsaray in ay xukuumada kula xisabtamaan dhibaatooyinka dhaqaale kuna tartar geliyaan, hasa yeeshee waxa uu sheegay in xukuumadu jawaabtii larabay aysan ka bixin dhibaatada hada taagan ee ku saabsan sarifka lacagaha.
Xildhibaan Sheekh Aadan Sheekh Max’ed ayaa waxa uu shegay in xukuumadu ay daawaneyso iyada oo shacabka Soomaaliyeed ay jaha warerinyaan shaqsiyaad danatooda eeganaya oo sarifka meesha ay doonan u wada.
Canbaareyntaan kasoo yeertay gudiga dhaqaalaha baarlamanka Soomaaliya ayaa waxa ay imaanyesaa iyada oo wasiiru dowlada wasaarada maaliyada Soomaaliya shalay ay ka dhawaajiyay in ay deg deg wax uga qaban doonto dhibaatada ka taagan isku bedelashada lacagaha oo aan laheyn sicr go’an.
Ciirciirka sarifka lacagaha oo Soomaaliya ka jiray tan iyo bishii tagtay ayaa waxa ay dhibata tii ugu darned gaarsiisay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dabaqada Hoosee oo qarashkii yaraa ee ay heesteen wax u goyn waayay kadib markii halka Doolar Qiimihiisu gaaray 16,000 oo Shilin Soomaali ah iyada oo shey walibana sidii markii hore lagedi jiray uu taaganyahay.
Sicika isku bedelashada lacagaha ee dalka Soomaaliya waxaa jaan gooya rag kooban oo taajiriin ah kuwaas oo subax kasta kashira sida ay yeelayaan iyo dhanka ay u wedayaan, go’aankooda sarifka lagu socodyiiyo hadaba meesha ay u arkaan in dantoodu ku jirtana shacabka kale ku hogaamiya.